नेपाल भर्सेस सिंगापुर टी ट्वान्टी क्रिकेट : वर्षाले रोकिएको खेल शुरु (लाईभ भिडियो सहित), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेपाल भर्सेस सिंगापुर टी ट्वान्टी क्रिकेट : वर्षाले रोकिएको खेल शुरु (लाईभ भिडियो सहित)
काठमाडौं । मलेसियामा जारी विश्व कप एसिया छनोट अन्तगर्तको बी समूहको छनोट प्रतियोगितामा शुक्रबार भएको नेपाल र सिंगापुरबीच खेल वर्षाले प्रभावित भएको छ ।
वर्षा भएपछि खेल केही सयमका लागि रोकिएको खेल फेरि शुरु भएको छ । टस जितेर पहिला फिल्डिंग गरेको नेपालले खेल रोकिँदासम्म सिंगापुरको ३ विकेट लिएको थियो ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म सिंगापुरले 10 ओभरमा 59 रन बनाएको छ । उसले3विकेट गुमाएको छ ।
मलेसियाको क्वाललम्पुरस्थित वायुमास ओभल मैदानमा नेपालले टस जितेर सिंगापुरलाई पहिला ब्याटिंगको निम्तो दिएको छ । नेपालका लागि सोमपाल कामीले २ विकेट लिएका छन् । यस्तै सन्दीप लामिछानेले १ विकेट लिएका छन् ।
सिंगापुरले ४ रन बनाउँदा पहिलो विकेट गुमाएको थियो ।
आजको खेलमा नेपालले प्रदिप ऐरी, आरिफ शेख र ललित भण्डारीलाई आराम दिएको छ । मेलेसियामा स्पीनरहरु सफल भइरहेकाले नेपाल ३ जना विशषज्ञ स्पीन बलर सन्दीप लामिछाने, बसन्त रेग्मी र ललितनारायण राजवंशीका साथमा मैदानमा उत्रिएको छ ।
यस्तै दुई जना पेस बलर सोमपाल कामी र करण केसीले फास्ट बलिंग आक्रमणको नेतृत्व गर्नेछन् । हेरौ लाईभ भिडियो ।